Basic eziokwu na ozi banyere Spain | Akụkọ Njem
Ozi na Basic Ozi banyere Spain
Monica sanchez | | Ebe njegharị, España
Spain bụ otu n'ime obodo kachasị mma Europe ịga leta. A maara akụkọ ihe mere eme ya, ọdịbendị ya na gastronomy ya n'ụwa niile. A na-ewerekwa ndị bi na ya mmekọrịta mmadụ na ibe ya soro ndị na-eleta ala ndị a.
Ma ị bi ma ọ bụ onye chọrọ ịma banyere obere akụkụ ụwa a, n'isiokwu a anyị ga-enye gị isi data na ozi gbasara Spain nke ahụ ga-eju gị anya.
1 Ebee ka Spain dị?
2 Ihu igwe nke Spain
4 Ọnụ ọgụgụ
5 Nlegharị anya na Spain
Ebee ka Spain dị?
Nke a bụ mba nke bụ akụkụ nke European Union. Ejiri mpaghara 504,645, gbaa ya Obodo 17 kwurula. Ọ dị na Western Europe, ma na France na mpaghara ugwu, Portugal na ọdịda anyanwụ na Gibraltar na ndịda. Oké osimiri abụọ gbara ya gburugburu: Atlantic n'akụkụ ọdịda anyanwụ ya na ndịda ya, na Osimiri Mediterenian n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Ekwesịrị ikwu ya Oké Osimiri Mediterenian agaghị adị ma ọ bụrụ na Strait nke Gibraltar adịghị "emeghe", ya mere, ọ ka bụ obere osimiri hụrụ ọmụmụ na ọnwụ nke ọtụtụ mmepe anya kachasị mkpa, dị ka Roman, Greek ma ọ bụ Egypt. Mana ka anyị ghara ịhapụ. Ugbu a, ka anyị hụ otu ihu igwe ha nwere na obodo a.
Ihu igwe nke Spain
Ihu igwe na Spain dị nnọọ iche. N'ihi ụda okwu ya, ọ nwere ike ịnya isi na ya nwere ike ịnụ ụtọ ihu igwe dị iche iche.
Ugwu nke mba: n'ebe ugwu, n'ime obodo Galicia, Cantabria, obodo Basque, Navarra, Aragon nke ugwu na ugwu Catalonia, enwere udiri ugwu. Mmiri ozuzo adịghị agbanwe agbanwe, na-aba ụba nke ukwuu na ọdịda anyanwụ. Banyere oge okpomọkụ, ha dị ala n'oge oyi, na-eru oke ntu oyi, ma dị nwayọọ n'oge ọkọchị.
South nke mba ahụ: na ndịda, na obodo Andalusia na Murcia, ihu igwe na-abụkarị Mediterranean; nke ahụ bụ, okpomọkụ dị elu n'oge ọkọchị, na-ajụ oyi n'oge oyi. Ffọdụ frosts nwere ike ime na mpaghara ugwu (dị ka Sierra Nevada, nke dị na Granada) n'oge oyi, mana n'ozuzu n'akụkụ a nke Ala Iberia, ha nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ. N'ezie, n'ihu ndịda ị na-aga, ọ ga-adịkwu mkpa itinye ncha ihu igwe, ebe ọ bụ na ihu igwe dị na mbara igwe, ọkachasị na Ceuta na Melilla, nke dị na North Africa. Na Canary akipelago, nke di n’akuku odida anyanwu nke Africa, ha nwere otutu ikuku; ọ bụ ezie na ekwesiri ighota na ntu oyi nwekwara ike ime na ebe di elu n'oge oyi.
N'ebe ọwụwa anyanwụ: n’ebe ọwụwa anyanwụ e nwere ihu igwe Mediterenian. Obodo ndị Valencian, Catalonia na Balearic Islands nwere oge oyi dị jụụ, yana obere frosts mgbe ụfọdụ, na oge ọkọchị dị ọkụ (karịa 30ºC). Na Balearic Islands, a ghaghị ikwu na oge ọkọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'ihi na osimiri gbara ya gburugburu, nke na-eme ka mmetụta ọkụ dị elu karịa nke temometa gosipụtara. Oke ugwu di obere.
West na etiti nke obodo: N'ime obodo nke Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid na ndịda Aragon, enwere ọnọdụ ihu igwe dị jụụ n'oge oyi, nwere oke ntu oyi. Mmiri ozuzo bara ụba na mgbago mgbago ugwu, ma nwetụ obere ntakịrị chee na ndịda ha. Oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ.
Nke a bụ mba a na-asụ ọtụtụ asụsụ. Asụsụ gọọmentị bụ, n'ezie, Castilian ma ọ bụ Spanish, ma ndị ọzọ bụ ndị a ma ama, dị ka asụsụ Catalan a na-asụ na Catalonia, Basque n’obodo ndị Basque, ma ọ bụ Galician nke dị na Galicia.
Ndị a kwesịrị ịgbakwunye olumba dị iche iche, dịka Andalusian, si Madrid, Nnukwu, wdg.
Onu ogugu, dika onu ogugu ikpeazu emere na 2015 site n'aka National Institute of Statistics, bu Ndi bi na 46.449.565, na ụmụ nwoke 22.826.546 na ụmụ nwanyị 23.623.019.
Nlegharị anya na Spain
Nke a bụ mba nwere ọtụtụ iji nye na njem nleta. Ma ị na-ahọrọ iji oge ezumike gị n’akụkụ osimiri, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị hụrụ ugwu na egwuregwu nwere ike ịme anya ebe ahụ, ị ​​ga-aga Spain.
Na mkpokọta, ebe ọ bụla dị ịtụnanya, mana ọ bụ eziokwu na enwere ọtụtụ obodo ndị na-ewu ewu nke ukwuu, yabụ, ndị kacha agakwa. Ha bụ ndị a:
Barcelona: obodo nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Antonio Gaudí. Obodo nke Barcelona na-anabata ndị njem nlegharị anya na ntụrụndụ na ntụrụndụ dị iche iche maka ụtọ niile: ị nwere ike ịga n'ụsọ osimiri, gaa leta obodo ochie, ma ọ bụ gbagoro n'ugwu.
Seville: Andalusia obodo par kacha mma. Ọ bụ ebe egwu egwu nke ndị egwu Andalusia, ma taa, a na-eme mmemme na ụbọchị pụrụ iche na-emegharị ya. Ihe ngosi Eprel jupụtara na agba, egwu na ọ joyụ nke na-eme onye ọ bụla na-aga.
Tenerife: ị gaghị aga ebe dị anya iji nwee ọnụ ụsọ mmiri na-ekpo ọkụ. Na Tenerife, n'ihi ihu igwe dị mma ọ nwere n'ime afọ niile, ịnwere ike ịnụ ụtọ ụsọ mmiri n'akụkụ ebe ị nwere ike sọfụ.
Madrid: ịbụ isi obodo nke mba ahụ, ọ bụ n'ezie otu n'ime obodo kachasị eleta. N'ebe a, ị nwere ike ịga na Prado Museum, ikekwe nke kachasị mkpa na mba ahụ dum, nke gosipụtara ọrụ ndị na-atọ ụtọ dịka Ogige Ubi Nke Delwa, nke Hieronymus Bosch dere. I nwekwara ike ileta ụlọ ihe ngosi nka nke dị nso na nke a, nke bụ ihe ngosi nka Thyssen. Ma ọ bụrụ na ị na-amasị osisi, gaa lee Royal Botanical Garden ma ọ bụ Parque del Oeste, ị ga-ahụ ya n'anya 😉.
Agwaetiti Mallorca: Obere agwaetiti a (nke kachasị na Balearic archipelago) na-anabata ọtụtụ puku ndị njem nleta kwa afọ ndị chọrọ ịnụ ụtọ ụsọ mmiri ya, ndụ abalị ma ọ bụ okike. Ma ebe ọ nwere ihu igwe dị nro, ụbọchị ole na ole oyi na-atụ, ị chọrọ ịpụ maka ịgagharị.
Ya mere ugbu a na ị maara, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụbọchị ụfọdụ agaghị echefu echefu, gaa Spain. O doro anya na ị ga-enwe nnukwu ọ greatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ozi na Basic Ozi banyere Spain
Maapụ eji abụghị map ndọrọ ndọrọ ọchịchị Spanish, amaghikwa Gaudí maka onye osise (ọ bụ onye na-ese ụkpụrụ ụlọ). Ma obu ihe bara uru
Kedu ihe ị ga-ahụ na ụzọ dinosaurs nke Asturias
Getaways dị nso na Madrid